Dhaliyaha Aamusnaanta Aamusan,dhaliyaha Ricardo Naafada,matoorka Dhaliyaha
Generator-ga Qalabka yar
Qaybaha Qaybinta Jenerayaasha
Qalabka dhaliya naaftada
Awooda FMW ayaa bixisa noocyo ah qalabka korantada dhaliya iyo qalabka korantada dhaliya.
qaybo kale oo madal aan badnayn
Awooda FMW ayaa bixisa asalka ah qaybaha curiyaha iyo Shiineeska AC qaybo kale oo madal aan badnayn sida sida AVR iyo Rectifiers.
qaybaha matoorka dhaliyaha
Awooda FMW ayaa bixisa asalka ah qaybaha matoorka matoorka ee Cummins, Perkins, Deutz, Ricardo, Shanghai, Yuchai, Lovol iwm .
Digniin: 1. Hubi shaqaalaha in loo tababaray isticmaalka iyo isticmaalka habboon ee bateriga. Had iyo jeer xiro qalabka ilaalinta shakhsiyeed ee saxda ah (PPE) markaad maareyn karto batariyada. 2. Baadhitaanka dayactirka bateriga waa in sidoo kale la dhammaystiraa iyadoo qayb ka ah kormeerka dayactirka joogtada ah. 3. Had iyo jeer xiro PPE habboon markaad qabato qalabka korontada. Haddii lagu xoqay elektaroolitiga, isla markiiba biyo ku nadiifi biyo nadiif ah oo raadso talo caafimaad. 4. Weligaa ha ku darin sulfuric acid aan baqdin galin bateriga. 5. Ka ilaali beteriyada si toos ah si aad uga hortagto foosha elektariyaha. Electrolyte waa sulfuric acid dilaacay oo waxyeello u leh maqaarka. 6 . Isticmaal qalabyada wax lagu xakameyn karo marka la jarayo ama la xirayo bateriga. Waligaa ha dhigin aaladaha ama biraha walxaha ku jira terminaalka bateriga. 7. Inta lagu jiro xukunka, batteriga wuxuu bixiyaa gaasaska qarxa. Badi batteriga ku hay meel hawo wanaagsan leh iyo meel ka baxsan olol iyo qamaar. Sigaarcabka sidoo kale waa mamnuuc. 8. Jenerayaha ayaa la dhigay Bateriga, sharciga, waa in aan lagu tuurin qashinka guryaha. Bateriga waxaa ku jira maaddooyin halis ah oo ku jira gobolka oo idil, mid kasta oo ka mid ah waxa uu ka kooban yahay electrodes of lead metal (Pb) iyo lead (IV) dioxide (PbO2) ee elektirito ah oo ku saabsan 33.5% w / w (6 Molar) sulfuric acid (H2SO4). Goobta laga saaro labadaba electrodes waxay u beddeshaa sunta (II) sulphate (PbSO4) iyo elektaroolka ayaa lumisa sulfuric acid kala badh oo wuxuu noqonayaa midda biyaha ugu sareysa. Waxaa dhici karta in uu waxyeelo u geysto deegaanka si uu ugu soo diro goobaha qashin-qubka, gubidda bateriga ayaa sidoo kale keeni kara wasakheynta atmospheric. Wax ka qabashada batariyada acid leedhka waxay noqon kartaa halis sidaa daraadeed waa muhiim inaad raacdo dhammaan tilmaamaha badbaadada. Batariyadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qalabka korontada si loo ilaaliyo habboon. Aaladda batroolka ah nadiifi oo qallaji oo hubso in furaha daboolka ay adag yihiin (haddii la rakibo). Ku nadiifi kaysarka batroolka mid ka mid ah xalalka nadiifinta ee soo socda: • Isku dar ah 0.1 kg (0.2 lb) oo baking soda ah iyo 1 L (1 qt) oo biyo nadiif ah • Isku dar ah 0.1 L (0.11 qt) ammonia iyo 1 L (1 qt) biyo nadiif ah Si fiican u biyo raaci kiiska batroolka. Dhamaan xidhiidhiyeyaasha batariga waa in la nadiifiyaa oo la adkaystaa. Isticmaal fasal ganaax ah oo waraaqo xoqan ah si aad u nadiifiso terminaalka iyo kabriidka kabriidka. Kala saar alaabta ilaa inta dusha sare ee dhalaalaya ama dhalaalayo. Ha ka saarin maaddooyinka xad-dhaafka ah. Ka saarida xad dhaafka ah ee maaddada korontada si ay uga hortagaan qashinka. Heerka elektarooligga waa in uu daboolaa taarikada / taakuleenta (1/2 inji / 13 mm) gudaha batroolka si loo xoojiyo bedelka buuxda. Haddii heerkulka dareeruhu ka hooseeyo saxarada / daboolka, kaliya ku dar biyo diirran; marnaba ha ku darin aaladda batroolka si kor loogu qaado mugga, maaddaama lagu daro aashi...
dayactirka baytariyada loogu talagalay jeneraterka
1. Xaqiiji in shaqaalaha loo tababaray sida loo maareeyo iyo sida habboon ee loo isticmaalo baytariyada. Had iyo jeer xidho qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed ee saxda ah (PPE) markaad wax ka qabanayso baytariyada.
2. Hubinta dayactirka batteriga waa in sidoo kale loo dhammeeyaa iyadoo qayb ka ah kormeerkaaga dayactirka joogtada ah.
3. Had iyo jeer xidho PPE ku habboon markaad wax ka qabanayso elektrolyte. Haddii lagu buufiyo koronto, isla markiiba ku nadiifi aagga ay dhibaatadu gaadhay biyo nadiif ah oo raadso talo caafimaad.
4. Weligaa ha ku darin batari aan dhib lahayn oo sulfuric acid ah.
5. Baytariyada u toosi si aad uga hortagto inuu ku daadinta elektrolyte. Electrolyte waa aashite sulfuric acid waxayna waxyeelo u leedahay maqaarka.
6 . Adeegso aalado leh gacan-gacmeed go'an markii aad ka saareyso ama ku habboonayso batteriga. Weligaa qalab ha dhigin ama walxaha bir birimbarka dushiisa.
7. Xilliga lagu amrayo, baytarigu wuxuu bixiyaa gaasaska waxyaabaha qarxa. Batariga ka fogee meel hawo leh oo ka fog ololka qaawan iyo kuwa ololka leh. Sigaar cabista sidoo kale waa mamnuuc.
8. Jeneraal dhigay baytariyada, sharci ahaan, waa inaan lagu tuurin qashinka guriga.
Baytariyada waxaa ku jira maadooyin halis ah oo gobolka lagu eedeeyay, unug kastaa wuxuu ka kooban yahay elektaroolka birta rasaasta (Pb) iyo rasaasta (IV) dioxide (PbO2) oo ku jirta elektiroonigga ah qiyaastii 33.5% w / w (6 Molar) sulfuric acid (H2SO4). Dawladdii meesha ka baxday labadaba electrodes waxay isu beddelaan sunta rasaasta (II) sulphate (PbSO4) elektaroniguna wuxuu lumiyaa unugyadiisa sulfuric acid oo uu noqdaa ugu horeysa biyo. Waxay waxyeelo u geysan kartaa bay'adda si ay ugu dirto qashin-qubka, baytariyada gubasha waxay sidoo kale sababi kartaa wasakhowga hawada. Wax ka qabashada baytariyada acid acid ay qatar ku tahay sidaa darteed waa muhiim in la raaco dhamaan tilmaamaha badbaadada.
Baytariyada waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah matoorka matoorrada waana in si habsami leh loo dayactiro. Meesha bateriga ka dhig mid nadiif ah oo qalalan oo hubi in wax kasta oo marinka hawadu ka adag yihiin (haddii lagu rakibo).
Ku nadiifi kiiska batariga mid ka mid xalalka nadiifinta soo socda:
• Isku dar ah 0.1 kg (0.2 lb) oo soda dubista iyo 1 L (1 qt) oo biyo nadiif ah
• Isku dar ah 0.1 L (0.11 qt) ammonia iyo 1 L (1 qt) oo biyo nadiif ah
Si fiican ugu nadiifi kiiska batteriga biyo nadiif ah.
Dhamaan xiriirada batteriga waa iney ahaadaan kuwo nadiif ah oo cufan. U isticmaal darajo wanaagsan warqad-warqadda ah si aad u nadiifiso marinnada iyo fiilada korantada ku xir. Ha ka saarin qalabka si xad dhaaf ah. Qaadista xad dhaafka ah ee sheyga waxay difaac u noqon kartaa kahortagga daxalka.
Heerka elektaroonigga waa inuu daboolaa saxanka / wareegyada (1/2 inji / 13 mm) gudaha batteriga si kor loogu qaado wareejinta buuxa. Haddii heerka dareeraha ahi ka hooseeyo taarikada / xirmooyinka, kaliya ku dar biyo madoow; waligaa ha ku darin aashito batari kor u qaadida mugga, maadaama ku darista aashito dheeraad ah waxay baabi'in doontaa xirmooyinka.
Waxaa lagu talinayaa in la hubiyo korantada iyo xaalada baytariyada 500 oo saacadood oo socod ah. Xaaladaha deegaanka ee sarreeya, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo magdhow kuleylka oo la hubiyo in badan si joogto ah loo eego, tusaale ahaan 200 saac kasta oo socod ah. Jeegagani waa in sidoo kale loo dhammeystiraa iyada oo qayb ka ah kormeerkaaga dayactirka joogtada ah.
Akhriska la xidhiidha: Aamusnaan Diesel Generator , Ricardo Diesel Generator
Generator Set Aamusnaan Diesel Generator Ricardo Diesel Generator
Hore : Genset Battery Removal and Fitting
Xiga : Dhibaatada hagaajinta ee loogu talagalay koronto-dhaliyaha
Fuzhou FMW Power Co.,LTD. waa shirkad soo saaraha tamarta naaftada ah iyo shirkad bixiye shidaal oo laga helo shiinaha oo leh khibrad ka badan 15 sano.
Waxaad nala soo xiriiri kartaa hab kasta oo kugu habboon. Waxaan heli karnaa 24/7 iyada oo loo marayo fax, email ama telefoon.
genset degdeg ah oo xasilan
Qalab koronto-dhaliye oo hooseeya
30kva dhaliyaha dhawaaqa hooseeya
Ricardo generator set
ricardo soo saarista
Ricardo aaladda aamusnaanta
Xuquuqda daabacaadda © 2015-2020 Fuzhou FMW Power Co., Ltd..Dhamaan xuquuqda la keydiyay.
Hore Wax Bixin Dheeraad Ah Haatan Fadlan riix halkan si aad u heshid
Haddii aad qabtid su'aalo ama talooyin, fadlan naga tag annaga fariin, waan kuu soo jawaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee aan awoodno!